दिल्लीमा उपचार गरेर फर्किएका युवाको भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु, स्वाब परीक्षण गरिँदै – Health Post Nepal
दिल्लीमा उपचार गरेर फर्किएका युवाको भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु, स्वाब परीक्षण गरिँदै
२०७७ जेठ २४ गते १५:५४
भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका २७ वर्षे पुरुष उपचार गराउन भारत गएको खुलेको छ। स्पाइनल इन्जुरी भएपछि झन्डै एक वर्षअघि उनी दिल्ली उपचार गराउन गएको माडी नगरपालिकाले बताएको छ।
निको भइसकेपछि नेपालसँगै भारतमा पनि लकडाउन हुँदा उनीहरू उतै नै रोकिएका थिए। भारतमा लकडाउनको कारण बस्न समस्या भएपछि उनी आफ्ना मामासँग जेठ १३ गते नेपाल आएको आफन्तले जनाएका छन्।
सुनौली नाकामा आएपछि माडी नगरपालिकाले उद्दार गरेर दिवाकर स्मृति विद्यालय माडीमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। शारीरिक अवस्था कमजोर भएकाले उनलाई व्यवस्थित र छुट्टै राखिएको माडी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रवीण भण्डारीले जानकारी गराएका थिए। ‘उहाँको भारतबाट आउँदै शारीरिक अवस्था कमजोर थियो।
हामीले परिवारलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्नुहुन्छ भनेर पनि सोधेका थियौं। तर घरमा सुरक्षित राख्न समस्या हुने देखेपछि हामीले अपांगमैत्री शौचालय बनाएर राखेका थियौं,’ भण्डारीले भने, ‘यहाँ पनि उहाँकै मामाको रेखदेखमा राखेका थियौं।’
उनी सुनौली नाकामा जेठ १२ गते आइपुगेका थिए। उनको समस्यामा परिवारहरू पनि जानकार नै रहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए। क्वारेन्टाइनमा राख्दा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखिएको भण्डारीको दाबी छ।
‘हामीले दैनिक ज्वरो नाप्ने गरेका थियौं। एक्कासि बिहीबार उहाँलाई ज्वरो देखियो। ज्वरो आएपछि शुक्रबार भरतपुर अस्पतालमा पठाएका थियौं,’ भण्डारीले भने, ‘ज्वरो देखिएपछि माडीको बगौडा अस्पतालका डाक्टरले परीक्षण गरेको र अवस्था जटिल भएपछि भरतपुर अस्पतालमा रेफर गरेका थिए।’
माडीका प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न एक सिनियर अहेब राखिएको छ। क्वारेन्टाइन देखदेखका लागि डाक्टर, ल्याब टेक्निसियन, सिनियर अहेब र नगरपालिका प्रतिनिधि गरी ६ जनाको अनकल ड्युटी टोली बनाइएको भण्डारीले जानकारी गराए।
ज्वरो, खोकी हुँदै श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि माडीको क्वारेन्टाइनमा रहेका तीय युवालाई शुक्रबार उपचारका लागि ल्याइएको भरतपुर अस्पताल जनाएको छ। भरतपुर अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको अवस्थामा शनिबार मृत्यु भएको अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले जनाए।
उनका अनुसार युवाको मृत्यु बिहान १० बजे भएको हो। मृत्यु हुनुअगाडि साढे ९ बजे स्वाब झिकेर कोभिड–१९ परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको डा. अधिकारीले बताए।